Iinkonzo ezitsha zeTwin zamaLungelo oBunjineli bamawele eDijithali- iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2019 ezintsha, Microstation-Bentley
Amawele edijithali angena kwindawo ephambili: iinkampani zobunjineli kunye nabanini bomnini-ndawo. Faka iminqweno yamawele edijithali
I-SINGAPORE - The Unyaka kwiZibonelelo ze2019-Okthobha 24, 2019 -Iinkqubo zeBentley, eziHlanganisiweyo, umboneleli wehlabathi wesoftware ebanzi kunye neenkonzo zamafu zamawele edijithali, wazisa ngeenkonzo ezintsha zamafu zamawele obunjineli beziseko zophuhliso. Amawele edijithali yimifanekiso yedijithali yeeasethi ezibonakalayo kunye nolwazi lwazo lobunjineli, oluvumela abasebenzisi ukuba baqonde kwaye babonise ukusebenza kwabo kwilizwe lokwenyani kubomi babo bonke. Ewe i-evergreen »amawele edijithali aphucula i-BIM kunye ne-GIS nge-4D.
U-Keith Bentley, umsunguli kunye negosa eliyintloko yezobuchwephesha, uthe: "Namhlanje" ubudala bamawele edijithali "buyaqhubeka, kwaye isantya sazo mihla le siyahamba. Abasebenzisi bokuqala esisebenzile nabo sele behlala kwizikhundla zobunkokeli kuqoqosho lwedijithali entsha, besiya kwizinto ezintsha kwiinkqubo zabo zeshishini nakwiimodeli zabo zeshishini. Izibonelelo ezifunyenwe ngokufaka endaweni yamashumi eminyaka ubudala kunye nokuhamba komsebenzi okungasebenziyo okwenziwe ephepheni, ngokuvulekileyo, kuphilayo, kunokuthenjwa kwaye amawele edatha yedijithali mkhulu. Ukujoyina oko kunye ne-ecosystem yenkqubo yezinto ezintsha ngokusebenzisa amaqonga omthombo ovulekileyo kwenza amandla angenakuchazeka otshintsho lwezibonelelo. Andikhumbuli ixesha elinomdla kakhulu kubuchule beziseko zophuhliso okanye kwiNkqubo yePortugal. "
Iinkonzo ezintsha kwilifu ledijithali
Iinkonzo ze-ITwin zivumela iinkampani zobunjineli ukuba zenze, zibone kwaye zihlalutye amawele edijithali yeeprojekthi zezibonelelo kunye neeasethi. Iinkonzo ze-iTwin zinxibelelanisa umxholo wobunjineli wedijithali yezixhobo zokuyila ze-BIM kunye nemithombo yeenkcukacha ezininzi, ukufezekisa "ukubonwa kwe-4D" ngamawele edijithali, kunye nokurekhodwa kweenguqu zobunjineli kuyo yonke iprojekthi / ishedyuli yeempahla, ukubonelela ingxelo egciniweyo yokuba ngubani otshintshe ntoni kwaye nini. Amaqela obuNjineli asebenzisa iinkonzo ze-iTwin ukwenza uphononongo kunye nokuqinisekiswa kwedatha yoyilo kunye nokuvelisa ulwazi / uyilo imibono. Abasebenzisi bezicelo eziyilo ze-900 banokusebenzisa inkonzo yokuPhononongwa yoyilo lwe-iTwin yokujonga uyilo lwe-ad hoc, kwaye iiprojekthi zisebenzisa i-ProjectWise zinokongeza inkonzo yokuPhononongwa yoyilo lwe-iTwin kwimisebenzi yabo yedijithali ukulungiselela amawele edijithali iprojekthi ngokubanzi.
IPlantSight ngumnikelo odityaniswe ngokudibeneyo yi-Bentley Systems kunye ne-Nokia, enika abanini-ndawo kunye neenjineli zabo amandla okudala, amawele edijithali ahlala elungile eenkqubo zokusebenza. I-PlantSight ixhasa ukusebenza, ukugcinwa, kunye nobunjineli bokufikelela kwidatha ethembekileyo nechanekileyo yamawele ngendlela yokuntywila, kubandakanya iP &ID, iimodeli ze3D, kunye nedatha yeIoT.
Inika umbono okhethekileyo wenyani kwimodeli yolwazi eqinisekisiweyo, yenza ukuba ubukrelekrele bemeko, umgca wokubona kunye nokuqonda komxholo. I-PlantSight yaphuhliswa ngokudibeneyo yiMicrosoft kunye neNokia isebenzisa iinkonzo ze-iTwin kwaye ifumaneka kurhwebo kuyo nayiphi na inkampani.
Inkonzo yeaseti ye-eTwin Imersive Asset Service ivumela abaqhubi abangabasebenzisi be-AssetWise ukulungelelanisa idatha yokusebenza yeasethi kunye nohlalutyo lokusebenza kwimeko yemawele edijithali, okwenza ulwazi lobunjineli lufikelele kubaphulaphuli abaninzi babasebenzisi ngokusebenzisa amava abo umsebenzisi wokuntywila kunye nokwenzeka Inkonzo yeasethi ye-eTwin Imersive Asset Service ibonisa "amanqaku abalulekileyo" omsebenzi kunye notshintsho kwimeko yeeasethi ixesha elininzi, ekhokelela ekuthathweni kwezigqibo ngokukhawuleza kunye nangolwazi olunolwazi oluthi ekugqibeleni luncede ukuphucula ukusebenza iiasethi kunye nenethiwekhi.
Amawele edijithali angena kwindawo ephambili
Ubunyani obuhlala buvela be-asethi ebikade isebenza ngaphambili bekunzima ukuyibamba ngokudijithali kwaye ihlale ihlaziywa. Ukongeza, ulwazi oluhambelana nobunjineli, kwiintlobo ezahlukeneyo zeefomati ezingahambelani kunye notshintsho oluhlala luhleli, "idata emnyama", ayifumaneki okanye ayisebenzi. Ngeenkonzo zamawele zedijithali, i-Bentley inceda abasebenzisi ukuba bakhethe kwaye bakhethe amawele edijithali ukuphucula ukusebenza kunye nokugcinwa kwee-asethi ezibonakalayo, iinkqubo kunye neenkqubo zokwakha, ngokubonakalayo kokuntywila kwi-4D kunye nokubonakala kohlalutyo.
Kunyaka we-Bentley kwiZiseko zoNcedo ze-2019, amawele enkqubela phambili anikezelwa kwiiprojekthi zokugqibela ze-24 kwizigaba ze-15, kwiindawo ezijikeleze amazwe e-14 ukusuka kwezothutho, uthungelwano lwamanzi kunye nezityalo zonyango, kwizityalo zamandla, izityalo zensimbi kunye nezakhiwo Ngokubanzi, ukutyunjelwa kwe-139 kwizigaba ze-17 kuchaze injongo yamawele edijithali kulwazi olusetyenzisiweyo kwiiprojekthi zazo, ukwanda okukhulu kwamagama e-29 ngokunxulumene ne2018.
Iimbono malunga namawele edijithali ekusebenzeni
Kwisifundo setekhnoloji, uKeith Bentley ungene kwinqanaba kunye nabameli abavela eSweco naseHatch, ebonisa imibono yamawele eziseko zedijithali ezisebenzayo.
Sweco Idigital edityanisiweyo idibene neprojekthi yesiporo esiziikhilomitha ezisithoba kwisixeko saseBergen eNorway. Ukongezwa kwenkqubo ekhoyo kulawulwa ngokugqibeleleyo kwiimodeli ze-3D BIM, ukusuka kwizifundo ezizezinye ukuya kuyilo lweenkcukacha zobunjineli. Ukusetyenziswa kweenkonzo ze-iTwin kwavumela iSweco ukulandelela utshintsho ngokuzenzekelayo kunye nokunciphisa iimpazamo, ukuvumela ukubonwa kwe4D.
Hatch ukugqiba ukwenziwa kwangaphambili, ukubonakala kunye nobunjineli obuchaziweyo bokufakwa kwesalfaic acid kwiDemocratic Republic of the Congo. Isoftware yokuqulunqa izityalo ka-900 ivumele iqela leprojekthi ukuba lenze i-digital egqibeleleyo kwaye inengcaphephe kumgangatho weenkcukacha, ihambisa iinkqubo zomgangatho wobunjineli njengenxalenye yomzamo we-3D womzekelo, xa kuthelekiswa neenkqubo Umgangatho osekwe kwimidwebo yesiko. I-Hatch yakwazi ukunciphisa ukunyuka kwemveliso emva kokuqaliswa kweenyanga ezintandathu ukuya evekini.
Microsoft Udala iiprototypes zamawele edijithali kwikomkhulu lakhe leAsia eSingapore nakwikhampasi yakhe yaseRedmond. Iqela leMicrosoft Real Estate kunye neQela loKhuseleko liphumeza indlela yokuhamba ngeDijithali yoBomi beDijithali yokwakha ukusebenza, inzuzo, ukwaneliseka kwabasebenzi, ukuvelisa kunye nokhuseleko. Iinzame zika-Microsoft zokumelwa kwedijithali yeempahla ezibonakalayo ezinjengezakhiwo zisekelezelwe kwi-Microsoft Azure Digital Twins, inkonzo ye-IoT encedisa imibutho ukudala imodeli yedijithali ebanzi yemeko yendawo. I-Azure Digital Twins ikhutshelwe uluntu kwi-2018 kwaye ngoku yamkelwe ngabathengi bakaMicrosoft kunye namaqabane kwihlabathi liphela, kubandakanywa neWindows ngenxa yeenkonzo zayo ze-iTwin. Iinkampani zisebenza kunye ukwenza amawele edijithali kumaziko amatsha eMicrosoft eSwitzerland.
Amawele e-digital ecosystem
Zombini iinkonzo ze-iTwin kunye nePlantSight ziphuhliswe ngeqonga lomthombo elivulekileyo iModel.js zamawele edijithali, ezaqala ukusungulwa ngo-Okthobha we-2018 kwaye yafika kwinguqulelo yayo ye-1.0 ngoJuni we-2019. Esona sizathu siphambili sokuvula iikhowudi zeModel.js kukukhuthaza inkqubo yokuziqhelanisa nezinto ezintsha zokuphuhlisa isoftware, abanini, iinjineli kunye nabahlanganisi bedijithali.
Omnye wabo bahlakulela isoftware yendalo yi vGIS Inc., eyayisebenzisa iModel.js ukudibanisa inyani exubeneyo (XR) isisombululo kwiwindows eyothutho lwamasango. Eyona nto ixutywayo yesicelo esenziwa ngokubonakalayo sidibanisa imodeli yoyilo lweprojekthi kunye nenyani, ebaleni, ngexesha lokwenyani. Abasebenzisi ebaleni banokubona izinto ezibonakalayo zangaphantsi, ezinjenge mibhobho kunye neentambo, ezidityanisiweyo kulungelelwaniso lwangempela-lwazo. Abasebenzisi bamane bakhomba izinto ngezixhobo zabo ezisebenzisa iselfowuni ukuze babone izinto zoyilo zeprojekthi kule meko.
U-Alec Pestov, umsunguli kunye ne-CEO ye-vGIS, uthe: Iqonga le-iModel.js sisixhobo esikhulu sokuphuhlisa nokudibanisa izixhobo kunye neenkonzo ezongezwe ngexabiso, ezinje ngeniso elongeziweyo kunye nesisombululo sokwenyani esihlanganisiweyo esinikwa yi-vGIS. Siyakuthanda ukusebenzisana okugqibeleleyo kunye neenkonzo ze-iTwin kunye neendlela zophuhliso ezingenasiphako zokufikelela ekudibanisweni okugqibeleleyo, kwaye sinethemba lokwandisa amandla okusebenzisana, ngeenkonzo ze-iTwin «.
Inkcazo yamawele edijithali
Amawele edijithali ayimifanekiso yedijithali yeasethi kunye neenkqubo zomzimba kwimeko yendawo yazo ejikelezileyo, apho ulwazi lwazo lobunjineli luhamba khona, ukuqonda kunye nemodeli yokusebenza kwabo. Njengempahla yehlabathi yokwenyani abayimelayo, amawele edijithali ahlala etshintsha. Zihlaziywa ngokuqhubekayo kwimithombo emininzi, kubandakanywa izinzwa kunye ne-drones, ukumela urhulumente ngexesha elifanelekileyo okanye iimeko zokusebenza zee-aseti zeziseko zangempela zehlabathi. Ewe, amawele edijithali, - ngokudibanisa i Umxholo wedijithali kunye izinto zedijithali kunye Ubalo maxesha lwedijithali, BIM kunye ne-GIS phambili nge-4D.
Izibonelelo zamawele edijithali
Amawele edijithali avumela abasebenzisi ukuba bajonge yonke i-asethi, kwisiphequluli sewebhu, ithebhulethi okanye ngee-headsets zenyani ezihlanganisiweyo; ukukwazi ukuqinisekisa imeko, ukwenza uhlalutyo kunye nokuvelisa ulwazi lokuxela kunye nokwenza umsebenzi ngokufezekileyo. Abasebenzisi banokwakha ngokwedigital ngaphambi kokwakha ngokwasemzimbeni, ukucwangcisa kunye nokuphelisa imisebenzi yolondolozo ngaphambi kokuba bayenze kwihlabathi lenene. Ngoku banesoftware abanayo ukuba babone amakhulu eemeko, thatha ithuba lokufunda kumatshini ukuthelekisa ezinye iindlela zoyilo okanye iindlela zokulungisa kunye nokwandisa kwiiparamitha ezininzi. Ukujonga kunye nokujonga umxholo wedatha yobunjineli kukhokelela ekuthathweni kwezigqibo kulwazi kunye nokuthatha inxaxheba kwabachaphazelekayo kulo lonke ixesha lokujikeleza kweeasethi.
Malunga neenkonzo zeBentley iTwin
Iinkonzo ze-ITwin zivumela amaqela eeprojekthi kunye nabanini bamacandelo ukudala, ukubonwa ngamehlo kwi-4D kunye nokuhlalutya amawele edijithali yee-asethi zeziseko zophuhliso. Iinkonzo ze-ITwin zivumela abalawuli bengcaciso yedijithali ukuba babandakanye idatha yobunjineli eyenziwe zixhobo ezahlukeneyo zoyilo zibe ngamawele edijithali aphilayo kwaye bazidibanise nemodeli yokwenyani kunye nenye idatha enxulumene nayo, ngaphandle kokuphazamisa izixhobo zabo okanye iinkqubo zabo. Abasebenzisi banakho ukujonga kwaye balandelele utshintsho lwe-injineli kumgca wexesha weprojekthi, ukubonelela ngengxelo egciniweyo yokuba ngubani otshintshe ntoni kwaye nini. Iinkonzo ze-ITwin zibonelela ngolwazi olusebenzayo kwabo babandakanyekayo ekuthathweni kwezigqibo kulo lonke umbutho kunye nomjikelo wobomi beempahla. Abasebenzisi abathatha izigqibo ezizizo ezinolwazi, bacinge kwaye baphephe iingxaki ngaphambi kokuvela, kwaye baphendule ngokukhawuleza ngokuzithemba okugqibeleleyo, okuguqulela ekugcinweni kweendleko, ukuphuculwa kokufumaneka kwenkonzo, impembelelo encinci kwezendalo kunye nokhuseleko oluphuculweyo.
Malunga neenkqubo zeMicrosoft
Iinkqubo ze-900 yinkqubo ekhokelela kuyo yonke isisombululo sesoftware yeenjineli, abavelisi bezakhiwo, iingcali zomhlaba, abakhi kunye nabasebenzayo bokuyila, ukwakha kunye nokusebenza kweziseko zophuhliso, kubandakanya imisebenzi yoluntu, iinkonzo zikarhulumente, izityalo zemizi-mveliso kunye izixeko zedijithali. Vula imodeli yokusebenzisa imodeli esekwe kwiMicrosoft MicroStation kunye nokusetyenziswa kwayo okuvulekileyo kwesicelo ukudityaniswa koyilo; IProWise yakho kunye ne-SYNCHRO zibonelela ngokukhawulezisa ukuhanjiswa kweprojekthi; kwaye i-AssetWise yayo inikezela ukukhawulezisa iiasethi kunye nokusebenza kwenethiwekhi. Ukugubungela ubunjineli beziseko zoncedo, iinkonzo ze-900 zeTwin ziqhubela phambili ngokusisiseko i-BIM kunye ne-GIS ngamawele edijithali ye-4D.
I-Systems ze-Bentley zisebenzisa abasebenzi abangaphezulu kwe-3.500, ivelisa umvuzo wonyaka we- $ 700 yezigidi kumazwe e-170 kwaye ityale imali engaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi kuphando, uphuhliso kunye nokuthengwa kweempahla nge-2014. Okoko yaqala ukusebenza kwi-1984, inkampani iyeyona nto ininzi yabasungululi bayo abahlanu, abakwaPortugal. www.bentley.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini «I-EthicalGEO» - isidingo sokujonga kwakhona umngcipheko weendlela ze-geospatial
Post Next Omnye unyaka, elinye ibali elibalulekileyo, elinye amava amangalisayo… Ibiyi-YII2019 le kum!Okulandelayo »